Ukulandelela Inyama Yezimbuzi e-Ningizimu Afrika
Ukulandelela ukukwazi ukulandelela noma yikuphi ukudla noma isithako emuva kokuvela kuwo. Kuzolandela indlela yokukhiqiza, ukucubungula nokusabalalisa kuze kufike ekuthengiseni kabusha eshalofini lesitolo. Ukulandelela kubalulekile uma kuziwa empilweni yomphakathi. Ukukwazi ukunquma imvelaphi yemikhiqizo kanye nezithako kubalulekile ukuvimbela ukusakazeka kwanoma isiphi isifo okungenzeka kubangelwe umkhiqizo wokudla noma isithako.
Ukulandelela izilwane kusho ukukwazi ukulandela isilwane noma umhlambi wezilwane kuzo zonke izigaba - kusukela ekuzalweni endaweni ethile ekuhlatshweni nasekusetshenzisweni kwesidumbu.
Ukwenyuka kwezilwane zasemakhaya kanye nemhlaba jikelele kwemikhiqizo yezilwane kuye kwaletha amathuba amasha okuthumela izinto ezilwaneni. Lokhu kukhuthaze ohulumeni nezinhlangano zemfuyo emazweni amaningi ukuthi atshale ekuthuthukiseni ingqalasizinda kanye nezinqubo zokulandelela izinhlelo zokulandelela izilwane nemikhiqizo yazo.
Ukulandelela izilwane kuyakha isisekelo sezinhlelo zokulawula ukungcola ekukhiqizeni ukudla kwesilwane. Ngakho-ke, ukulandelela ukuxhumana kuyisixhumanisi phakathi kwezilwane nempilo yabantu kanye nokuxhumanisa ukuphepha kokudla kanye nekhwalithi yokudla.
Ukutholakala Kwezifuyo eNingizimu Afrika
ENingizimu Afrika, umsebenzi uqhubeka ukusetha uhlelo lweNational Identification and Traceability System (I-ITS SA) ukuxhumanisa abanikazi nezilwane, indawo yabo kanye nokuzibhalisa ngabanye futhi babhale ukunyakaza kwabo kwi-database ephakathi.
Nakuba kugxila emisebenzini yokulima yezimbuzi yokuhweba kanye nemikhuba yokulima nokuhlatshwa, umkhakha wezolimo ophuthumayo uphinde ufakwe kwisiphakamiso samanje. Kodwa-ke, izinselele eziningana eziye zahlangenwe nakho emkhakheni ophuthumayo kubandakanya ukungabi nalutho kwengqalasizinda ye-IT.
I-I-ITS SA ingasiza ekuvikeleni umhlambi wezilwane kazwelonke njengoba kungasiza ekuvimbeleni izifo nokulungela izifo eziqhamukayo ukuqinisekisa ukusheshisa nokulawula okusheshayo ngaleyo ndlela kunqanda ukulimala ukuhweba.
(Ithenda yokubiza umnikezeli wesevisi ukuthuthukisa i-I-ITS SA, ivaliwe ngo-22 Septemba 2018.)